M/weynaha Puntland iyo wafti uu hoggaaminayo oo ka dhoofay Garowe, kuna sii jeeda Ingiriiska. – Radio Daljir
Garowe, Oct 12 ? M/weynaha dawladda Punland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole? iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaraha ee magaalada Garowe ee caasimada Puntland.
M/weynaha iyo waftigiisa ayaa ku wajahan waddanka Ingiriiska halkaasi oo ay ka heleen martiqaad rasimi ah ayna kaga qaybgali doonaan shir khuseeya arrimaha Soomaaliya, si gaar ahna ula xiriira burcad-badeedda sida uu M/weynuhu ku caddeeyey shir saxaafadeed uu garoonka ku qabtay.
M/weynuhu waxaa uu sheegay shirkaasi in ay Puntland ahaan horgayn doonaan qodobo badan ee ku saabsan burcad-badeedda gaar ahaanna hababkii xal buuxa looga gaari lahaa joojinta falalka burcad-badeednimada, oo M/weynuhu ku tilmaamay mushkilad caalami ah, isagoo xusay burcaddu in ay tahay dhibaatoa ka dhalatay gurubsiga sharci-darrada ah ee lagu hayo khayraadka badaha Soomaaliya.
M/weynaha waxaa socdaalkiisa dibabadda ee maanta bilawday waxaa ku weheliya wasiirka dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raage, wasiiru-dawlaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah Prof. C/qaadir Xaashi, guddoomiyaha guddiiga doorashooyinka Maxamed Xasan Barre iyo qaar ka mid ah xoghayeenadiisa gaarka ah.
M/weynaha iyo waftigiisa ayaa ku sii hakan doona magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi oo ay kulamo kula yeelan doonaan madax badan oo beesha caalamka ah.
Safarka m/weynaha Puntland uu ku aaday dalka Ingiriiska ayaa ku soo beegmay xilli ay muuqdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo gobolka quseeya sida safarkii m/weyne Siilaanyo uu ku yimid deegaanno ka mid ah gobollada SSC, iyo u dhag-taagid la xiriirta shirkii wadatashiga ee lagu waday in Puntland lagu qabto kaasoo uu cago jiid ka muuqdo.
M/weynaha Puntland iyo wafti uu hoggaaminayo oo lagu wado in ay mardhaw in ay u ambabaxaan safar dalka dibaddiisa ah.
Garowe, Oct 12 ? M/weynaha dawladda Puntland Maxamed Maxamuud ?Faroole? iyo wafti uu hoggaamiyo ayaa lagu wadaa mardhaw in ay dalka ka dhoofaan, iyagoo socdaallo hawleed ku mari doono dalal badan dibadda ah.
M/weynaha iyo waftgiisa ayaa ku wajahan dalka Ingiriis halkaasi oo ay ka heleen martiqaad rasmi ah, waxaana ay haatan sii mari doonaan waddanka kenya, walina lama faahfaahin u jeeddada socdaalka.
Dhinaca kale ma cadda tirada dhabta ah ee ay ka koobnaan doonaan waftiga m/weynaha iyo cidda socdaalkiisa ku wehelin doonta.
Safarka m/weynaha oo faahfaahsan xilli dhaw ayaan idin soo gudbin doonnaa.